Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 3 - Blockchain News
Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 3
Fanaovana antsirambina ny fiarovana fepetra
Vola ao amin'ny cryptocurrencies Mifandray amin'ny avo loza mety hitranga, anisan'izany ny vokatry ny anatrehan'ny eny an-tsena ny maro ny scammers izay mampiasa fomba isan-karazany ny fanafihana hahazoana crypto-tahiry ho an'ny mpampiasa vola. Noho izany, araka ny fanekena ny cryptotrader Peter McCormack, fanafihana Crypto mpanjifany no nanao isan'andro. Ny fifanakalozana ihany koa ny foto-kevitra ny taratasim-bola tsy tapaka hery.
Tsirairay mpihazona ny cryptocurrency dia tsy maintsy ho fantatry ny mety ho fandrahonana sy hitandrina izay rehetra fepetra, rehefa niara-niasa tamin'ny cryptocurrencies:
– Fidio ny fomba mitahiry cryptocurrency: fa tsara indrindra ny mampiasa mangatsiaka mpanjifany ary asaivo nanohana ny;
– Ampiasao roa-antony fanamarinana ny mpampiasa
– Mametraka ny azo antoka anti-virosy fandaharana
– Aza mamboraka ny fanalahidy manokana
– Jereo hatrany ny adiresin'ireo mpanjifany sy ny rohy
– Manana rafitra azo antoka ny tenimiafina sy ny sit-teny
Very maina ihany koa ny fitandremana ny tenimiafina sy ny Sid-tokony homarinana avy amin'ny toerana azo antoka, raha tsy izany dia mety hamerina ny hanjo an'i Mark Frauenfelder, iza any 2017 saika very ny BitCoins ho mihoatra noho ny $ 32,000. Ary satria very ny taratasy iray ny tenimiafina 24 teny avy amin'ny kitapom-batsy mangatsiaka. Tonga saina fa tsy afaka mahatsiaro ny PIN-fehezan-dalàna ho an'ny kitapom-batsy, dia Nampihoron-koditra noho ny fanatanterahana izany dia tsy hahazo ny cryptocurrencies amin'ny fomba rehetra.
Frauenfelder niantso ho amin'ny fanohanana ara-teknika avy amin'ny kitapom-batsy crypto Mpanao, nanoratra tao amin'ny sehatra fiadian-kevitra, nitady fomba Hack azy ary na dia niverina tany amin'ny manam-pahaizana manokana hypnosis, Fa izany rehetra izany dia tsy hitondra ny vokatra tiana.
Vokatr'izany, dia nanampy ny tanora mpijirika, izay nanoratra ny toromarika mikasika ny fomba mampitresaka ny rindrambaiko ho mangatsiaka kitapom-batsy. Na izany aza, dia nampisy fiantraikany ny adin-tsaina maro ny volana, ny vola sy ny asa nanirahana ny mpijirika mba hanafahana ny teny miafina sy ny Sid-teny.
Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 2 Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 4
Soraty: Richard Abermann
Blockchain News 28 Janoary 2018
Hampijanona manamafy ny ...
EU parlemanta publis ...
Hafatra an-dalana, pejy goavana ...
Previous Post:Fahadisoana ny Crypto mpamatsy vola. Error 2
Next Post:Ethereum Foundation dia nanambara ny mpandray ny “voalohany onjam-Grants” ny $ 2.5 tapitrisa